Mudaaharaadyo taageero iyo diidmo isugu jira oo ka dhacay Kenya kadib doorashadii Uhuru Kenyatta | RBC Radio
Mudaaharaadyo taageero iyo diidmo isugu jira oo ka dhacay Kenya kadib doorashadii Uhuru Kenyatta
Posted on August 12, 2017 Raad Raaca, RBC, Wararka
Nairobi (RBC Radio) Boqollaal dadweyne u badan dhalinyaro ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee Kenya qaarkood xalay waxyar uun ka dib markii lagu dhawaaqay guusha doorashada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo mar labaad ku guuleystay jagada madaxweynaha Kenya.
Kenyatta ayaa xalay loogu dhawaaqay inuu ku guuleystay codad gaaraya 8,203,290 oo u dhiganta 54% guud ahaan codadka la dhiibtay, isagoo ka guuleystay musharixii ku soo xigay ee Raila Odinga oo heley illaa 6 milyan oo cod, kana midka ahaa 8 musharax ee xilka u tartantay.
Dadka dibadbaxayay ayaa isugu jiray kuwo taageersan doorashaa madaxweynaha, iyo qaar ka xun natiijada oo sheegay in codadka la xaday.
Magaalada Nairobi ayaa xaafado ka mid ah dabaaldegyo soo dhoweyn ah ay ka bilawdeen abaarihii 10kii fiidnimo markii guddiga doorashada Kenya ku dhawaaqeen in uu guuleystay Uhuru Kenyatta.
Xaafada Soomaalida ay degto ee Islii ayaa ka mid ah meelaha dabaaldegyada sooo dhoweynta ay ka dheceen.
Dadka ayaa waddooyinka u soo baxay, iyadoo dadka, gawaari iyo mootooyin hoon iyo sawaxan isku dareen. Illaa saqdii dhexe ayay sii socdeen dabaaldegyada.
Hase ahaatee, xaafado kale oo ay ku badan yihiin taageerayaasha mucaaradka ayaa dibadbaxyadu isu bedeleen isku dhac dhexmaray taageerayaasha mucaaradka iyo booliska. Xaafadahaasi waxaa ka mid ah Mathare, Dandora, Kibera Kawangware iyo Korogosho.
Magaalooyinka Kisumu iyo Siaya ayaa sidoo kale rabshadaha ay ka dheceen ka dib markii boolisku ay ka hortageen dad careysan oo diidan guusha madaxweynaha Kenyatta. Ugu yaraan hal ruux ayaa la sheegayaa inuu ku dhintay magaalada Siaya.
Magaalooyinka Mombasa iyo Kwale oo ay gobolka ay Muslimiinta ugu badan degaan ee xeebta, ayaa iyaguna maanta oo Sabti ah wada xiran. Waxaana wariyaasha ku sugan magaalooyinkaasi ay sheegayaan in ganacsiga iyo gaaadiidka uusan shaqeyneyn, iyadoo dadweynaha aysan guryahooda ka soo bixin.